भाग्गेमानीका भुतै कमारा- जै नेपाल देउवा दाइ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, पुस ४, २०७८ मा प्रकाशित
यसपाली बडो गजब भयो । धेरैले देउवा दाइलाई हराउन खोजे । तर, कसैको दाल गलेन । देउवा दाइ भनेको देउवा दाइ नै हो । ७७ वर्षे युवा नेता ! अब जनताले पत्याए पनि नपत्याए पनि तीनै तहको चुनापमा हाम्रो दाइले बहुमत ल्याम्छन् । हामी कार्जेकर्ता ढुक्क । महाधिवेशनको भासनमै बटारिँदै र लतारिँदै भए पनि बहुमत ल्यारै छाड्ने भनिदिए । त्यसबेला धेरै कांग्रेसीले अकडो भने मैले चाहिँ कडो भनेँ । मुलुकको प्रधानमन्त्री, हाम्रो कांग्रेसको सभापति, भाग्यमानी देउवा दाइ मेरो पनि यहीँबाट जै नेपाल है अनि बधाई छ ।
हौ भिरघरे ! आज त निकै खुशी छस् त । लाटोकोसेरोले मुसो फेलापार्यो भनेर हो कि क्या हो ? अँ भन्त महाधिवेशन त सकियो कांग्रेसले भोट चाहिँ कहिले गनी सक्छ अरे ! पानी ट्याङीलाई मतपेटिका बनाएर दुनयाँ हँसायो ।
गनी सक्यो नि विध्वंसे काका ! हाम्रो कांग्रेसले ढिला गर्न जानेकै छैन । अब हाम्रो पार्टीमा दाइको नेतृत्व दह्रो गरी स्थापित भयो । दाइले युवाहरूलाई गुटुङटुङ नेतृत्वमा पुराउनु भयो । विश्वप्रकाश, गगन, धनराज जस्ता युवाले कांग्रेस हाँकेपछि देउवा दाइले भने जस्तै तीनै तहको चुनापमा वहुमत आम्छ ।
अहो ! सण्डे भाइ पनि आइपुगे छ ।
गफ सुन्नु आको नि हौ दाजु । अब देउवा, दाहाल र नेपालको पार्टी मध्ये कस्को पार्टी ठूलो बन्ने भन्ने विषयमा घमासान बहस चलेको छ भन्ने सुन्छु। कस्को पो बन्ला हँ काका ! देउवा, माधव, दाहाल अबको चुनापमा आफ्नै पार्टी ठूलो बन्ने भन्दै टेवुल कुच्चिने गरी डङ्का पिट्दै छन् ।
हेर भतिज सण्डे, हामी मिलेर चुनाप लड्छौ र भाग चाहिँ बराबरी लगाउँछौ । एमाले भन्ने पार्टीको नामोनिशाना राख्दैनौं । कि कसो भिरघरे भतिज !
अलि त्यसो होइन काका ! राष्ट्रियसभाको चुनापसम्म मिल्ने हो । त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा आ–आफ्नो झोलीतुम्बा बोकेर हिड्ने हो । एमसिसी पास नगरुनजेल साथसाथ, त्यसपछि बनिबास । हाम्रो कांग्रेस सप्पै चुनापमा एमालेसँग एक्लै घभिड्छ र सबैभन्दा ठूलो पर्टी बन्छ ।
निहुँ खोज्ने कुरा नगर भिरघरे ! तिमार्का लागि हाम्रो नेताहर्ले गर्नु नगर्नु गरेको छ । त्यसै त हाम्रा काम्रेडहरू लुइँकी लुईं ओलीको पार्टीतिर लम्की सके । कांग्रेसले पनि साथ छोड्ने हो भने हाम्रो अबस्था लखट्टु घोडाको जस्तो हुन्छ । न मान्छे बोक्न सक्छ, न दाना टोक्न सक्छ ।
भिरघरे दाइले ठिकै त भनेनी विध्वंसे काका ! अर्काको बैशाखी टेकेर कति दिन हिड्छौ ? आआफू दौडने । पुग्ने पुक्छ, नपुग्ने गफाडी समाप्त हुन्छ । अहिले तिमारु माओवादीको कार्जेकर्ता १२–१५ लाख पुग्यो क्यरे, चुनापसम्ममा २५–३० लाख भैहाल्छ किन डराउँछौ ? कार्जेकर्ताले मात्र भोट हाले भने तिमार्को पार्टी खत्रा ठूलो बन्छ ।
आ.. ! यस्तो कुरा छोड् । बरु काका ओली र प्रचण्डको जुहारी चलिरहेको छ । पहिला कतातिर भासन गर्दा प्रचण्डले ‘राजासँग मिलेर ओलीले संघीय गणतन्त्र समाप्त पार्दैछन्’ भन्दै थिए । अहिले ओलीले, हिसिला यमीले लेखेको एउटा किताब पढेर त्यही किताबको राजासँग प्रचण्डको साँठगाँठ भन्ने ‘च्याप्टरझ सुनाई दिएछन् । बस् अब के थियो । प्रचण्ड कालोनिलो ।
आइतबार, मंसिर २६, २०७८
के कालोनिलो भन्छस् ! अहिले हामीलाई हेप्न थालेकाछन् । पहिला माओवादीको नाम सुन्दा सबै डरले थरथर काम्थे, नडराउनेहर्लाई मुला काटे जसरी कारवाही गरिन्थ्यो । हिसिलाले पनि वाइयात कुरो लेखेर । अरुलाई भन्ने बाटो किन खोली दिएकी हुन कुन्नि ! हामीलाई सङ्कट परेकै बेला तिनले किन भन्नुपर्ने ?
काका ! प्रचण्डले ‘नोकरसँग वार्ता गरिदैन, मालिकसँगै वार्ता गरिन्छ’ भनेको र प्रचण्डले बाबुरामलाई ‘भारत भक्त’ भन्दा बाबुरामले प्रचण्डलाई ‘राजभक्त’ भनेका थिए । त्यो कुरा पनि भट्टराईले आफ्नो सानो पुस्तिकामा लेखेकाछन् ।
कसैले लेखेर केही लछ्छारपाटो लाग्दैन । उहिलेका कुरा खुइले । प्रचण्ड, बाबुराम, हिसिला जसले भने पनि सकियो । अरुले त लेखे भने कोही बात छैन, ओलीले चाहिँ त्यही कुरो किन भन्नु ! ओलीले भनेपछि पुरानै कुरा भए पनि हामीलाई रिस उठ्छ । उठेपछि उठ्छ उठ्छ । तँ मुलाङहरू पनि ओलीको तारिफ नगर ।
रिस खा आफू, बुद्धि खा अर्को । माओवादी आफ्नै रिसले सामाप्त भयो । कुबुद्धिले लतारेपछि समाप्त नै पार्छ भन्थे बुढापाकाहरू हो नै रछ । हौ काका ! एमालेसँग होइन अब हाम्रो कांग्रेससँग डराउने गर । तिमारू वामपन्थीलाई हाम्राले छाड्दैनन् । झन तिमारू माओवादीलाई त बदला लिन तयार भएर हाम्रो कांग्रेसहरू बसेका छन् ।
हेर केटा हो तिमारू कुरो बुझ्दैनौ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी भनेको ढुङ्गो र माटो हो । एउटा नभए अर्को अडिन सक्तैन । त्यसैले ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गो भनेको हो । हाम्रो पाँच दलीय साँठगाठ दीर्घकालसम्म रहिरहन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ । कांग्रेसले हामी र त्यो बबुरो माधव टुक्रोलाई अलपत्र पार्न पाउँदैन ।
सुन्यौ भिरघरे दाइ काकाको कुरा ! अब अनन्तकालसम्म माओवादीलाई कांग्रेसले बोकेर हिड्नु पर्ने भयो । एकातिर झोला अर्कोतिर चिम्टा बोकेर हिड्नु परेपछि कांग्रेस पनि गन्तब्यमा चाँडै पुग्ने भयो । सतीदेवीको लाश कहिले कुही सक्छ र शिवजी मुक्त हुन्छन् भनेर कांग्रेसी कार्जेकर्ताले पर्खिने दिन पनि आयो ।
वाइयात बकवास नगर सण्डे ! तैंले केही बुझेको छैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतका न्ययाधीशलाई, माधवहर्लाई नहटाउन हाम्रो सभामुखलाई र कार्जेकर्तालाई भ्रममा राख्न हामी आफैलाई कम ढाँटेको छ हामीले ! अहिले हाम्रो अधोगति भ’को बेला कांग्रेसले माओवादीलाई छाड्नु भनेको धोका हुन्छ ।
केको धोका ! हाम्रो गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने बेलामा धोका भएन ! गत चुनापमा हामीलाई छाडेर एमालेसँग मिल्न जाँदा धोका भएन ! २०६४ को चुनापमा मतपत्रमा एकलौटी छाप लगाउँदा र मतपेटिका साट्दा धोका भएन ! अनि अहिले चाहिँ कांग्रेसले माओवादीको औंला नसमाउँदा धोका हुन्छ ? राजनीतिमा धोका भन्ने हुँदैन । हाम्रो देउवा दाइले विश्वप्रकाशलाई गलहत्यउँदा त धोका भएन । प्रकाशमानले कोइरालाहरुलाई छिर्के लगाउँदा धोका भएन । हिँड सण्डे, जाउँ उभिण्डे खोलातिर । काका अब अर्को हप्ता भेटौंला है ।
पुरानालाई पराइ बनाउने अहिलेको पृथ्वीनगर